“Habashummaan” Ulaagaa Itoophiyummaan Ega Itti Fuftee … ???? | QEERROO
Posted on May 31, 2017 by Qeerroo
Warri Itoophiyaaf mudhii qabatee caraanaa jiru, diigamuu itoophiyaas walumaan labsaa jiru.Bara Dargii badii guddaan jecha “ummata tokko” jedhu ture. dargiin har’aa hin jiru, garuu warra Habashummaa leellisaniin har’allee habjuun jecha kanaa itti fufee jira. Har’allee sirna Fedaraalaa jala jiraachaa, Ummatoota Itoophiyaa jechuu irra, Ummata Itoophiyaa jedhanii tokkummaa sirba giddii fakkaatu kanneen gaggeessan daran baayyachaa jiru. miidiyaa biyyatti gama hundaan tu’atanii jecha kana gabbifachaa jiru. Habashummaan kaleessa Itoophiyaa qofaaf lallabamaa ture, har’aa bifa isaa geeddaratee habjoottoota humnoota sadii walitti fidaa jira. Keessattu Biyya alaa kanatti , lammiilee Ertiraa “Amichee” jedhaman ykn Tiwulidda Itoophiyaawwii ofiin jedhan, warra amaaraa fi Tigiree nuuti Habashoota jedhanii , Habashummaan wal fo’achuu ega eegalanii bubbulaniiru.
Biyya wayyaaneen bulchaa jirtu keessatti , Tigirootaa fi amaara caalaa , warra Tiwulidda Itoophiyaawwii jedhamantu Habashummaa leellisaa jira. Jarri kun yeroo ammaa , miidiyaa Biyyattii keessaa mootummaan tu’atamu hundaa tu’atanii jecha kana Ulaagaa Itoophiyummaatti ummatoota fudhachiisuuf yaalaa jiru. Industirii Aartii guutummaatti tu’atanii , Maqaa naannoolee waamu jibbanii , “Kiflahagar”jechaa jiru. Amichoonni Itoophiyaa keessatti warra irree ta’anii jiranu, miidiyaa fi industirii aartii kana akkamiin tu’atanii ilmaan cunqurfamoo irraan dhiibbaa geesisaa jiru ? humnasaa eessaa fidan ? kun gaaffi kiyyaa yeroo dheeraa ture. dhiheenya kana garuu Dubbii Pirazadantiin Ertiraa gaaffii fi deebii taasisan keessatti deebii isaa argadhe. Gaaffii fi deebiin kun isa OMN miti. kan biyya isaaniitii. Gaaffii fi deebii isaanii kana keessatti, kan jedhan “Gamtaan Awuroppaa akka Biyyaatti gargaarsa nurraa kutee ykn nu dhawwatee, dargaggoota Ertiraa Biyyaa baqachiisuuf, Biyyattiis diiguuf, yuuroo miliyoona 500 wayyaaneef kannanii. Kanaan dhaloota keenya gawwamsuuf yaalaa jiruu “ jedhan.
Itoophiyaa keessatti Tiwulidda Itoophiyaawwii jedhamanii irra jireessaan kan jiraatan isaanii. Wayyaaneen jara ofitti qabadee mootummaa qophixeessuuf jettee waa hundaa gootiif. Dhimmallee itti baatii. Qaama biraa dhiifnee, miidiyaa fi industirii Aartii qofaa haa fudhannu. Wayyaaneen TV Fedaraalaan bulu, chaanaalii 5 qabdii. EBC 1-5. Kana irratti naannoleen saglanuu chaanaalii mataa isaanii qabu. Kana irrattti, chaanaaloonni dhuunfaa fakkaatanii kaayyoo tokko qaban ni jiru. EBS, J TV, NAHOOM TV, QAANAA TV, yoo xiqqaatee chaanaalii TV mootummaan 100/100 harka keessaa qabu 19 tu jira. Midiyaa kana keessatti gaazexessitoonni hojjatan harka 80 Tiwulidda Itoophiyaawwiidhaa. Industirii Aartii addatti amaariffaan gaggeeffamu tu’atanii waggaatti Filimii fi diraamaa 360 baasaa kan jira isaanuma. Kana gadi fageenyaan yeroo biraa itti deebina.
Garuu jarri kun, qabeenyaa qabaniin ykn kubaaniyyaa qabaniin, Habashaa simintoo, habashaa hospital, habashaa restoraanti, Habashaa kiliniik, Habashaa ….kkf moggaafatu. Miidiyaa dhunfatanii keessa jiraniin asi ba’anii nuuti Habshootaa,,,,Itoophiyaan Biyya habashootaa jedhanii of dhaadhessuu jabiinaan itti fufaa jiru. Biyyi kun Ummata harka 85 kan hammatu warra kushiin waamuu gonkumaa hin barbaadan . chaanaaloota kanaan dirmaa hojjatan irratti , sagantaa dabarsan irratti , qophiilee akka FATAA BALU, YE AFTAA CAAWATAA, ISMAAMMAALLAWU ALISMAAMMAAM, JORDAAN SHOWU, HELAN SHOWOOO , HAGARINYAA, YEMAALEDA KOKOBOCHI, KKF (gara fuula duraatti bal’inaan tarrifnaa) akka dabootti wal waammatanii Waan barbaadan hojjatan. Saboota irratti roorrisan. fedhan Tewudiroos , miniiliik isaaniif waa tokkollee hin taanee, warra ittiin dhumnee irratti nutti qoosan.
Habashummaan ABBAA ISAANII FI TIWULIDDA ITOOPHIYAAWWIIN lallabamaa jirtu kun gonkumaa Biyya toophiyaa qarqara boollaa irra jirtu hin fayyisu. Inumaa xiiqii nu galchaa jiru. Ummatoonni Biyyatti harka 85 Ilmaan kushiidhaa. Kana cinaatti dhiisanii ye habashoochi hagar jedhanii lallabaa oolanii bulan , kaayyoo keenya irraa duubatti nu hin deebisan. Warshaa fi kubbaaniyyaan isaanii Habshummaan moggafaman yeroo isaanitti ni dhaamu.Warri Tiwulidda Itoophiyaawwii jedhaman kun , karaa TV isaanii kanaan , Anga’oo wayyaanee Tiwudiroos Adihaanoom yeroo mo’uu tarree galanii baga gammaddee jedhan. Facebook irratti daboo ba’aniifii akka filamuuf sagalee ka laachaa oolanii bulan , yeroof har’a gootummaa isaanitti fakkaachuu danda’aa. Guyyaa isaatti garuu salphina isaanii haguuggatu. Kun hedduu nama raaja. Miniiliikiin miidiyaa irratti faarsuun , fayyummaaf miti. madaa hin qoorree qabna. Sagantaa ijoollee Itoophiis jedhamuun oromiyaa keessa naanna’anii afaan Oromoo laaffisuuf yaaluun gonkumaa Habashummaa isaanii hin milkeessu.sagantaa Itoophiis jedhamu bajati addaa ramadameefii , bakka warra Tiwuliddan kun baayyatanitti qophii qophessee kaayyoo habashummaa babal’isuutti jiru. TV oromiyaa keessatti qophiin ijoollee garuu adaamaa keessaa hin ba’uu. Toomii fi jeerii ijoollee keenya afeeraa oola.
Isa dhugaa dubbachuuf Habashoonni sabummaa Ummatoota cunqurfamoo cafaqanii, Habshummaa irratti labsuuf shirri itti jiran Ummatoonni kan callisanii ilaalan ta’uu hin qabu. Warri silaa lammummaa Biyyattiin dhaadachuu qabnu osoo jirru isaan nurraa mulqanii , kan isaanii nurratti fa’achuuf fiigichi itti jiran inumaa isaan balleessa. Itoophiyaan warra Kushiin hin beeknee awwaalchii ishee fagoo hin ta’uu. Miidiyaa wayyaanee fi habashootaan Umama keenya sarbamnee, gonkumaa boquu cabsinee hin jiraannu. Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii waa’ee bakka itti dhalatanii fi guddatan faarfachuu irra, oromiyaa keessatti waan kaleessa duddatti baadhatan urgufachuun yaaluun badii dhalcha malee nagaa hin fidu. Habshummaa miidiyaa irraa lallabamuu mitii, kan waliin jiraannee nu fixan iyyuu nu hin jijjirree. Oromiyaa keessatti waggaa 150 caalaa jiraatanii afaan hin beekan. Seenaa hin beekan. Beekanis hin dubbatan. Garuu Habashummaan wal qabatanii , Habashummaa nu fudhachiisuu barbaadan .
Wanni irra guddaa nama saalfachiisuu, Ummata Oromoo miliyoona 45f eenyummaa isaa, aadaa isaa , seenaa isaa, qooqa isaa kabajuurra, Tiwulidda Itoophiyaawwii kuma 500 hin guunneef afaan amaareeffa fialanii Oromiyaa keessatti afaan oromoo irraan dhiibbaa geesisaa jiru. Biiroolee oromiyaa , addatti miidiyaa oromiyaa keessa Tiwulidda itoophiyaawwii dhibbootaan lakaa’amantu jira.Filmii fi diraamaa akka Hindootaa guyyaatti tokko hojjatanii, Oromiyaa keessa facaasaa ooluu. Filmii fi diraamaan hojjatan hundi isaa aadaa fi duudhaa sabootaa kan cabsuudhaa. Dhaloota ka doomsuudhaa. Hawaasa kan diiguudhaa.
Addatti har’aa , Naannoolee fi magaaloota heddu keessatti konsartiin adda addaa qophaa’aa jiru . hundi isaanii sabootaaf bakka hin laannee. Habashummaa kanneen leellisaniidhaa. Waan fedhee dhuftuu Tiwulidda itoophiyaawwiin Yuuroon booji’amtuyyuu , Oromiyaa keessa Habashummaa gadi dhaabuu akka hin dandeenyee itti nu dhaamaa. Wayyaaneef harka mirgaa ta’anii kanneen jiran boruu akka gaabban itti nu himaa.Habashummaan gonkumaa Ulaagaa Itoophiyummaa ta’uu hin danda’uu. Itoophiyaa diiguuf carraa dhumaa yoo ta’ee malee. Oromoon gonkumaa Habashaa miti. Oromoon kushiidhaa. Kun waa hundaa akka beekinu hubachiisuuf katabnee. Gadi fageenyaan barbaachifnaan maqaa fi seenaa tokkon tokkon isaani waliin ummata keenyaaf dhiheessuu dandeenya. Garuu nurraa dhaabbadhaa !!!!!!!!!!!!!!!!